Shalay Iyo Maanta 25 Sano Oo Dagaal U Dhexeeyay Itoobiya iyo ONLF.W/Q Eng mohamed ismail Ahmed
Friday April, 26 2019 - 06:05:50
Saturday July 07, 2018 - 12:24:54 in by Hargeysa Office
Mudo badan oo sanado ah waxaa soo socday dagaalo lagu hoobtay ,una badnaa ku dhufoo ka dhaqaaq.una dhaxeeyayJabhada WadanigaXoraynta ogaadeeniyaloona soo gaabiyo (ONLF)Iyo CiidamadaItoobiya .
Hadaynu dib u yara milicsanotaariikhda Jabhada ONLF , Aasaaskeedii :-
ØSanadkii15/8/1984-kii waxaa la aas aasay Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeeniya (JWXO) (ONLF) oo iyadu noqotay Jabhaddii ugu faca weynayd Jabhadahaasi Ogaadeenya u soo dagaalamay illaa hadana dagaal kulul kula jirtay Ethiopia.
ØSanadkii1991-dii ayay ONLF furtay Xafiisyadeedii ugu horeeyay.
ØSanadkii2/8-12/1992-ki waxaa dhacay ShirwaynahiiONLF oo Magaalada Garbo lagu qabtay.
ØSanadkii9/ 1992-dii waxaa dhacday Doorashadii deegaaankaoo ay ONLF 85% ku guulaysatay KuraastiiBaarlamaanka.
ØSanadkii1/23/ 1993-kiiwaxaa dhacay kalfadhiigii Baarlamaanka Deegaanka somalida ooC/laahi Maxumed SacdiMadaxwayne loogu doortay ,Godeynalooga dhigay caasimad.
ØSanadkii 1993-dii /bishii June, ayay Itoobiya ku qasabtay in la badalo Madaxwayne Sacdi waxaana Mar labaadla doortay Xassan Jire Qalinle.
Ølaga soo bilaabo1993 ayaa waxadhacay khilaaf soo kala dhexgalay dawladii dhexe ee itoobiya iyoururkiiONLf xaruntiisuna ahaydGoday .
ØSanadkii2/21/1993-kii waxaa dhacay Dagaalkii ugu horeeyay ee dhexmaray AskartiiitoobiyaIyo ONLF oo kadhacay Tuulada Birqod ee Gobolka Jarar .
ØSanadkii2/22/ 1994-kii waxaa dhacay Dagaalkii Wardheer oodhaliyaykhaasare nafeed iyo maal .
Økaas oo la rabay in lagu qabto Gudoomiyahii ONLFAUNSheekh Ibraahim Cabdallabalse aan la qaban .
Øwixiixilligaa ka dambeeyay waxayONLFiclaamisay dagaal ka dhan ah itoobiya , sidoo kalana itoobiya waxa u aqoonsatayONLF urur argagixiso .
Tan iyo 1994 ,waxa jiray dhibaato naf iyo maalba leh oo labada dhinac Onlf iyo Ciidanka itoobiyaugaysteen shacabkadegaanka somalida itoobiya , oo noqday garoonka lagu dhexdagaalamayo .
oo qolo kastaba shacabka degaanka , ku eedayso inay la shaqaynayaankooxda kale ee ka soo horjeeda.
xadhig , cagojuglayn , dil , kufsi iyo qaraxyo ayay wehel u noqdeen shacabku deegaanku .
xukuumadii kala duwaana ee deegaanka soo xukumay waxay mar kasta ku dhawaaaqi jireen inay soo cidhibtirayaanururka ONLF oo ayiyagu ugu yeedhi jireen Ururka Baabiinta Ogaadeeniya(UBO),waxay u sameeyeen jeelal lagu xidho maxaabiistaoo uu ka mid yahayJeel ogaadeen .
ONLflafteeduumay aabo yeelin shacabka deegaanka iyaga laftooduna waxay ku eedayn jireen in ay la shaqaynayaan ciidmada itoobiya , waxay inta badan gaysan jireen dilal , gubitaanka baabuur , hanti kale oo shacab leeyayIwm .
Xukuumada deegaanka lafteeda ,ayaa in badan lagu eedeeyay , In gabood falou gaysteenciidamadeeda liyuu booliska , dad shacaboo waxba galabsan.
Dadaal dheer iyo wadahadloka diba, waxa maanta oo ay taariikhdu tahay 5/7/2018 ayuu baarlamaanka itoobiya Ururka ONLFka saaray liiska ururada argagixisada.
Waxaana laga yaabaa in uu yaraado cadaadiskiilagu hayay dadka degaanka , ee tuhun koox kastaaka qabtay , dushoodana lagu dagaalamayay .
waxaa la rajaynyaa inhogaanka cusub ee itoobiya ABIY AHMEDisu soo jiido Ururda itoobiyaka dagaalamaiyo xukuumada dhexeee itoobiya .
shacabka deegaanka somaliada itoobiyana waxay uga dhigtay.
W/Q Eng mohamed ismail Ahmed
Darar-weyne:-Gudomiyaha Guddida Maamul Wanaaga Iyo Ladagaalanka Musuq Maasuqa Oo Booqday Xarunta Tababrka Darar Weyne.
Ruwanda:Itoobiya iyo Rwanda oo Iska Kaashanaya Horumarinta Dhallinyarada
24/04/2019 - 13:19:36
Adis-ababa:-Xadka Itoobiya Iyo Eritrea Oo Dib Loo Xidhay
24/04/2019 - 09:43:49
Hargeisa:-Madaxweyne Muuse Biixi Oo Maanta Qaabilaya Odayaal Ka Soo Kicitimay Gobolka Sanaag.
Adis-ababa:Xeerka Shiidaalka iyo Gaasta Itoobiya oo loo soo bandhigay Xisbiyada Mucaaridka ah
22/04/2019 - 10:08:39
Tripoli:-Dagaallo Xooggan Oo Wali Ka Socda Magaalada Tripoli Ee Dalka Liibiya
21/04/2019 - 09:52:44